Terroriste Guerre Violence = TGV | news2dago |
Terroriste Guerre Violence = TGV
news2dago 11 Febroary, 2009 13:14 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Izay no nanakoako eran'ny Mahamasina androany! Feno ny kianja na dia nikija aza ny orana. Norahonana tao @ Radio Viva avokoa ireo mpanankato saika handray anjara etsy Mahamasina. Torak'izany koa ny mpivarotra etsy @ pavillon analakely oe an'ny kaomina hono io ka dorany rehefa tsy manao ville morte!!! Efa tsy demokrasia intsony kosa izany.
Voaporofo koa fa mbola vahoaka ihany koa ireto miaritra ny orana mikija t@ 12 ora sy 45mn io sary io mbola betsaka noho izao ny vahoaka t@ 1ora sasany. Mbola maro koa ny tsy nanatrika teny nefa manohana ny filoha Ravalomanana satria miasa sy mianatra. Hanao ahoana indray ary ny tohiny ny tantara?
(Tsy mila TGV - sambory TGV)
Marina mihitsy ilay lahatsoratra nosoratan'ny namana atsy ambadika manao oe "Rehefa tsy miaraka @nay dia fahavalonay" dia inona izany tsy demokrasia ny fampihorohorona. Marihina fa na ireo mpitondra fivavahana aza dia voatevateva ao @ io radio viva io!!! Miantsy fahakalana olona hatrany ary mitoky teny fatratra ho manana irery ny marina ry zareo. Maro moa ny haino aman-jery tsy mandeha intsony satria matahotra toy ny matv sy ny record. Ny tvplus sisa no mba milaza vaovao tsy mahagaga fa an'ny ankilany koa io. Soa ihany fa vita ny Tvm ary tsy topotrano miono intsony ny malagasy any anindrana fa maheno vaovao tsara.